I-Jeepney Camper-iGlamping eTanay, eRIzal.
Ikharaveni sinombuki zindwendwe onguMichael
IJeepney yasePhilippine iguqulelwe kwindawo yokulala. Ifumaneka kumahlathi ashinyeneyo eSierra Madre eTanay, eRizal. Indawo yokuhlala eyohlukileyo enobuntofo-ntofo bezidalwa ezifana ne-Air-conditioning, i-Queen-size & ne-Double umatrasi, iKitchenette, amanzi ashushu, umgodi womlilo wenkampu kunye nezinye.
Undwendwe ngalunye kufuneka lube neSatifikethi seMpilo kunye nokuHamba yakutsha nje ukusuka kuvavanyo lwakho lwaseBaranggay okanye oluKhawulezayo ngeCert. (Ikhutshwe hayi ngaphezulu kweentsuku ezi-5 phambi komhla wokuhamba) Oku kufunwa zii-Checkpoints eTanay.
Headroom kwibhedi esezantsi ziphantsi. Ibhedi ekumgangatho ongasentla inendlu enkulu engaphezulu kodwa ifikeleleka kuphela ngeleli.
Sikwihlathi, silindele ukudibana nezilwanyana zasendle ezifana nezinambuzane kunye nezilwanyana ezincinci ezincancisayo.
Le renti yeyabucala kwaye abanini abanaxanduva lazo naziphi na iingozi, ukwenzakala okanye ukugula okwenzeka kwindawo okanye kwizibonelelo zayo. Abaninimzi abanaxanduva lokulahlekelwa zizinto zabo okanye izinto ezixabisekileyo zondwendwe. Ngokwamkela olu bhukisho, kuvunyelwene ukuba zonke iindwendwe zicingela umngcipheko wawo nawuphi na ubungozi obuvela kusetyenziso lwazo zakhiwo okanye abanye ababamema ukuba basebenzise indawo leyo.
IJeepney imi kumahlathi ashinyeneyo kwiintaba zeSierra Madre.
Amava antywilayo kuye nabani na ofuna ukunxibelelana nendalo ngaphandle kokuncama ubumnandi besidalwa. Zulazula kwiigadi zethu kunye negadi yeMango ekufutshane ukuze udibane nezilwanyana zasendle kunye neebhulukhwe ezingaqhelekanga.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Tanay